initial public offering(IPO)(initial public offering(IPO)) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आजदेखि म्युचुअल फण्डको १ अर्बको सार्वजनिक निश्कासन हुँदै(आवेदन संकलन केन्द्रको सूचिसहित)
काठमाण्डौ ।सेयर लगानी जोखिमपूर्ण हुने ठानिरहनुभएको छ भने अर्को म्युचुअल फण्डले लगानीको ठूलो अवसर सार्वजनिक गरेको छ । नवील इक्वीटी फण्डले १ अर्ब मूल्यको १० करोड युनिट सेयरमा सर्वसाधारणका लागि लगानीको अवसर दिन लागेको हो । यो सार्वजनिक निश्कासन आगामी असोज २ गतेदेखि हुने फण्डले बिहीबार एक आह्वानपत्र सार्वजनिक गर्दै जनाएको छ । नवील...
म्युचुअल फण्डमा पनि अचाक्ली आकर्षण, ८० करोडको माग्दा १ अर्ब २९ करोड आवेदन
काठमाण्डौ । सेयरको तुलनामा कम जोखिमको क्षेत्र मानिएको सामूहिक लगानी कोष(म्युचुअल फण्ड)मा समेत सर्वसाधारणको आकर्षण ह्वात्तै देखिएको छ । सर्वसाधारणलाई विभिन्न संचारमाध्यमले म्युचुअल फण्डको बिषयमा बुझाउन थालेपछि यसतर्फ लगानी गर्नेको संख्या बढेको देखिएको हो । सेयरको बिषयमा आधारभूत ज्ञान समेत नभएका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले...
पञ्चकन्या माई हाइड्रोले साढे २७ करोडको आइपीओ ल्याउने
काठमाण्डौ । औद्योगिक घराना पञ्चकन्या समूहद्वारा प्रवद्र्धित पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरले २७ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि २७ करोड ५० लाख मूल्यको २७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर आइपीओ गर्ने भएको हो । आइपीओ निकट...
आइपीओमा अचाक्ली माग, सवा करोडको सेयर पाउन तीन दिनमा १ अर्ब ८६ करोडको आवेदन !
काठमाण्डौ । सूर्योदय लघुवित्त बित्तीय संस्थाले खुलाएको १ करोड २० लाख मूल्यको आइपीओमा तेश्रो दिनसम्ममा करिब १ सय ५४ गुणा बढी आवेदन परेको छ । मागभन्दा अत्यधिक बढी आवेदन परेपछि कसलाई कति कित्ता सेयर पर्छ भन्ने बिषय कठीन बनेको छ । एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको १ लाख २० हजार कित्ता आइपीओ खुलाउँदा मंगलबारसम्म ५८ हजार ३ सय ९६ वटा आवेदन परेको हो ।...
१.२० करोडको आइपीओमा २ दिनमै ९६ करोडको आवेदन !
काठमाण्डौ । कम्पनीहरुले गर्ने सार्वजनिक निश्कासनहरुमा सर्वसाधारणहरुको आकर्षण अचाक्ली बढ्न थालेको छ । उनीहरु घण्टौ कुरेरै भए पनि यस्ता निश्कासनहरुमा आवेदन दिन आतुर भइरहेका छन् । आइतबारदेखि सुरु भएको सूर्योदय लघुवित्त बित्तीय संस्थाको आइपीओमा समेत यस्तै अचाक्ली आवेदन परिरहेको छ । दोश्रो दिन(सोमबार)सम्ममा देशभरका संकलन केन्द्रबाट माग...
आइपीओमा लगानी गर्ने हो ? आयो १.२ लाख कित्ता
काठमाण्डौ । सूर्योदय लघुवित्त बित्तीय संस्थाले आज(आइतबार)देखि १ लाख २० हजार कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) थालेको छ । एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल १ करोड २० लाख बराबरको आइपीओमा आवेदन खुलेको हो । आइपीओका लागि पहिलो चरणमा आगामी भदौ १५ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने म्याद तोकिएको छ । त्यसबेलासम्म पनि माग अनुसारको निवेदन नपरे आवेदन...
आरएसडिसीको आइपीओमा २२३ गुणा बढी आवेदन !
काठमाण्डौ । आरएसडिसी लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमीटेडले ४ लाख कित्ताका लागि खुलाएको आइपीओमा २२३ गुणा बढी आवेदन परेको छ । यो संस्थाले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ४ करोड रुपैयाँको आइपीओ खुलाएकोमा करिब ८ अर्ब २९ करोड बराबरको आवेदन परेको हो । भदौ ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म देशभरका संकलन केन्द्रबाट कुल करिब १ लाख ५८ हजार आवेदन परेका बिक्री...
आरएसडिसीको आइपीओमा उर्लियो मानवसागर, तेश्रो दिनसम्ममा १०१ गुणा बढी आवेदन(फोटो फिचर पनि)
काठमाण्डौ । सेयरमा लगानीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण अचाक्ली बढेको छ । प्रमाणको रुपमा आरएसडिसी बित्तीय संस्था लिमीटेडको आइपीओ भर्न तछाडमछाड गर्दै उर्लिएको मानवसागरलाई लिन सकिन्छ । लम्बेतान लाइनमा घामपानी सहदै आइपीओको आवेदन पर्न कस्सिएका लगानीकर्ताले आफूहरुसँग पूँजी भए पनि राज्य तथा निजी क्षेत्रले लगानीको उपयुक्त वातावरण नबनाएको...
अचाक्ली बढ्दै सेयरको माग, आरएसडिसीको आइपीओमा दोश्रो दिनमै ५२ गुणा बढी आवेदन
काठमाण्डौ । आरएसडिसी लघुवित्त बित्तीय संस्थाले खुलाएको आइपीओका लागि दोश्रो दिनसम्म ५२ गुणाभन्दा बढी आवेदन परेको छ । यो संस्थाले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ४ लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ)का लागि आइतबारदेखि आवेदन खुलाएको हो । आइपीओमा पहिलो दिन नै मागभन्दा २२.०४ गुणा आवेदन परेको र दोश्रो दिनसम्ममा ५२ गुणा भन्दा बढी...
आरएसडिसीको आइपीओमा अचाक्ली भीड, पहिलो दिनमै २२ गुणा बढी आवेदन
काठमाण्डौ । आरएसडिसी लघुवित्त बित्तीय संस्थाले भदौ ५ गतेदेखि खुलाएको आइपीओका लागि पहिलो दिनमै मागभन्दा २२ गुणा बढी आवेदन परेको छ । यो संस्थाले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ४ लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गरेको हो । आइपीओमा पहिलो दिन नै मागभन्दा २२.०४ गुणा आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको एनआइबिएल क्यापिटलले...
आइतबारदेखि ४ करोडको आइपीओका लागि आवेदन दिन सकिने, कहाँ–कहाँ छ संकलन केन्द्र ?(सूचिसहित)
काठमाण्डौ । बुटवलमा मुख्य कार्यालय रहेको आरएसडिसी लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमीटेडको ४ लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) भदौ ५ गते आइतबारदेखि सुरु हुने भएको छ । एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल ४ करोड रुपैयाँको आइपीओमा भदौ ५ गतेदेखि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले केही दिनअघि एक सूचना प्रकाशित गर्दै आइतबारदेखि आइपीओका...
१ करोड २० लाखको आइपीओ आउने, लगानी गर्ने अवसर
काठमाण्डौ । स्याङ्जा मुख्य कार्यालय रहेको सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले १ लाख २० हजार कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । १ करोड २० लाख मूल्यको सेयरको आइपीओ आगामी भदौ १२ गतेदेखि सुरु हुने बैंकले सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचना जारी गरी जनाएको हो । आइपीओका लागि आवेदन दिने प्रारम्भिक मिति भदौ १२...
आरएसडिसी लघुवित्तले ४ करोडको सेयर आइपीओ गर्दै (आवेदन संकलन केन्द्रको पूरा विवरणसहित)
काठमाण्डौ । बुटवलमा मुख्य कार्यालय रहेको आरएसडिसी लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमीटेडले ४ लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । आगामी भदौ ५ गतेदेखि ४ करोड मूल्यको ४ लाख कित्ता सेयर आइपीओ हुन लागेको हो । शुक्रबार कम्पनीले सार्वजनिक गरेको एक सूचना अनुसार भदौ ५ गतेदेखि आइपीओका लागि आवेदन खुल्ला गरिने र भदौ ८ गतेसम्म...
पैसा ठीक पार्नुहोस्, आउँदैछ १४ करोडको सेयर
काठमाण्डौ । सेयरहरुको आपूर्तिको तुलनामा माग कयौं गुणा बढी भइरहेको बेला एक जलविद्युत विकास कम्पनीले पनि १४ लाख कित्ता प्राथमिक सेयर निश्कासन(आइपीओ)को तयारी थालेको छ । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले आइपीओको तयारी थालेको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ५ लाख ६० हजार र सर्वसाधारणका लागि ८ लाख ४० हजार...
नेशनल माइक्रो फाइनान्सको आइपीओमा थामिनसक्नुको आवेदन : दोश्रो दिनमै ८८ गुणा बढी आवेदन
काठमाण्डौ । बजार र लगानीकर्ता बढेका कारण पछिल्लो समय नेपाली सेयर बजार गुल्जार बन्दै गएको छ । सेयरमा यति धेरै मागहरु हुन थालेका छन् कि मागलाई सम्बोधन हुने गरी सेयरको निश्कासन नै हुन सकेको छैन । यही कारण केही कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि निश्कासन गर्ने सेयरमा थामिनसक्नु गरी आवेदनहरु पर्न थालेका छन् । यो प्रवृतिको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ...
दोश्रो बजारमा 'बुल रन' चल्दा म्युचुअल फण्डमा चमक, न्याभ र नाफामा लगातारको वृद्धि
गुराँस लाइफको सतप्रतिशत हकप्रद लिने मौका, फागुन २१ गतेभित्र सेयरधनी बनिसक्नुपर्ने
त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी हुने सिटिजन्स बैंकको ऋणपत्र फागुन २० देखि